ကိုယ့်အချစ်ဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားရတဲ့ နောင်တများ -
ကိုယ့်အချစ်ဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခံစားရတဲ့ နောင်တများ
Posted on February 7, 2019 February 7, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
လူတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်နဲ့တွေ့မယ်၊ နောက် အဆင်မပြေရင် ပြတ်စဲမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကထားခဲ့တာ အထားခံရတာ ဖြစ်မယ်။ နောက် အသည်းကွဲမယ်၊ အချိန်က ကုစားမှုနဲ့ အဆင်ပြေသွားမယ်။ နောက် အချစ်သစ်တွေ့မယ်။
ဒါတွေက ခေတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်လာတာမို့ မဆန်းတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောင်တတွေကတော့ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီ နောင်တတွေက ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး အလိုက် အနည်းငယ်တော့ ကွာခြားမှုရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ ခုတော့ အက်ဒ်မင်က အက်ဒ်မင်ကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့၊ ညီမလေးတွေ၊ အစ်မတွေဆီက နားထောင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ နောင်တတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ အဲဒါတွေက …
၁။ ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးတာ
ငယ်ရွယ်သူတွေမို့ ဖြစ်သင့်၊မဖြစ်သင့်ဆိုတာထက် ခံစားချက်ကို မူတည်ပြီး ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ် တကယ် နားလည်မှုပေးတတ်တဲ့သူမျိုးထက် ရုပ်ချော အပြောကောင်း တတ်တဲ့ သူမျိုးကို ရွေးချယ်မိကြတယ်လေ။ နောက်တော့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ကွဲကွာသွားကြရော။ နောက်တော့မှသာ ငါ့ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူကို ရွေးမိရင်အကောင်းသား လို့ ဖြစ်သွားရတဲ့ နောင်တမျိုးပေါ့…
ချစ်လွန်းတော့လည်း အပြစ်မမြင်တတ်တာ သဘာဝပါ။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် အနိုင်ကျင့်မှုတွေ၊ အခွင့်အရေးယူမှုတွေ၊ ဥပေက္ခာပြုမှုတွေ အားလုံးကို အပြစ်မမြင်ဘဲ ချစ်နေမိခဲ့တာပါ။ ပြတ်ပြီးတဲ့နောက် အချစ်ဆိုတာ မရှိတော့မှသာ ခံစားချက်တွေပုံမှန်ဖြစ်လို့ ငါ ဘာလို့ရူးခဲ့တာလဲ ဆိုပြီး နောင်တရနေမိတာလေ။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြစ်တွေကိုတွေးမိတာ။
ကိုယ်က အရမ်းနားမလည်သေးတော့ သူ့အပေါ် မရည်ရွယ်ဘဲ ဆိုးခဲ့မိတာတွေလည်း ရှိနိုင်တာပဲနော်။ သူက ကိုယ့်အပေါ် အရမ်း ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပေမဲ့ ကိုယ်ကသာ ဆိုးမိ၊ အနိုင်ကျင့်မိခဲ့ပြီး နောက်တော့ နားလည်လာတော့မှ ကိုယ့်အပေါ်အရမ်းကောင်းတဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရပါလားဆိုပြီး ဝမ်းနည်းနောင်တရနေတာမျိုးလေ။
၄။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်အောင် မကြိုးစားခဲ့တာ
သူက ဘယ်လိုလူလဲ၊ သူနဲ့အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုတာ မတွေးမိခဲ့ဘဲ ခံစားချက်တွေ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်မိတာမျိုးလည်း ဖြစ်ခဲ့မှာပဲနော်။ ဒီတော့ မပြေလည်ခဲ့ကြတာ မဆန်းဘူးလေ။ နောက်တော့မှသာ သူနဲ့ ဒီထက်ပို နားလည်အောင်ညှိနှိုင်းနိုိင်ခဲ့ရင်၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးခဲ့မိရင် ကောင်းမှာပဲလို့ နောင်တရနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကိုယ်မဟုတ်တဲ့တခြားတစ်ယောက်ကို သူချစ်နေတဲ့အခါ ဒီအချက်တွေကို ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
၅။ သူ့ကို လက်လွှတ်ချိန်မှာ မလွှတ်ပေးခဲ့မိတာ
တကယ်တော့ ကိုယ့်အနားက ထွက်သွားချင်သူတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တားလို့မရပါဘူး။ ဒါကို မသိခဲ့တော့ ကိုယ့်အနားက သူထွက်မသွားဖို့အရေး သူ့ကို လက်မလွှတ်နိုင်ဘဲ စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲခဲ့တာ၊ ကိုယ့်အတွက်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်မှာကို မပူနိုင်ဘဲ သူ့ကို ခယတောင်းပန်ခဲ့မိတာတွေက အဆိုးဆုံးသော နောင်တတွေပါ။ အခုနေများတော့ သူပြန်လာမယ်ဆိုရင်တောင် ကန်တော့ဆွမ်းပါရှင်လို့ ပြောမိမှာလေ။
ဒါကတော့ အချစ်ဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောင်တအရများတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့လေ… ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ဘယ်လောက်ပဲ နောင်တရတယ်ဆိုဆို.. ပြီးတဲ့ ကိစ္စက ပြီးသွားပြီဟုတ်??? အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ပြီး လက်ရှိ စင်ဂယ်လ်ဘဝမှာပဲ ပျော်ရွှင်အောင်သာ နေကြည့်လိုက်ပါ… မပျော်တတ်သေးဘူးလား… မပူပါနဲ့… အက်ဒ်မင်တို့ရဲ့ Singles’ Night ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်…(၁၄.၂.၂၀၁၉) ချစ်သူများနေ့ကျရင် ဆီဒိုးနားမှာ လုပ်မှာနော်… ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်ကို သိချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ခ် မှာ ကြည့်လို့ ရပြီး ပွဲကို လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ လင့်ခ်လေးမှာ Register လုပ်ဖို့တော့ လိုပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
တူတူ ခံစားချက်တွေ မျှဝေဖို့ စောင့်နေမယ်နော်…
လူတဈယောကျဟာ အရှယျရောကျရငျ အခဈြနဲ့တှမေ့ယျ၊ နောကျ အဆငျမပွရေငျ ပွတျစဲမယျ၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျကထားခဲ့တာ အထားခံရတာ ဖွဈမယျ။ နောကျ အသညျးကှဲမယျ၊ အခြိနျက ကုစားမှုနဲ့ အဆငျပွသှေားမယျ။ နောကျ အခဈြသဈတှမေ့ယျ။
ဒါတှကေ ခတျေအဆကျဆကျဖွဈလာတာမို့ မဆနျးတော့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အခဈြဟောငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ နောငျတတှကေတော့ မှတျမှတျရရ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒီ နောငျတတှကေ ယောကျြားလေး မိနျးကလေး အလိုကျ အနညျးငယျတော့ ကှာခွားမှုရှိမယျ ထငျပါတယျ။ ခုတော့ အကျဒျမငျက အကျဒျမငျကွုံခဲ့ရဖူးတဲ့၊ ညီမလေးတှေ၊ အဈမတှဆေီက နားထောငျခဲ့ရဖူးတဲ့ နောငျတတှကေို ပွောပွပေးမယျနျော။ အဲဒါတှကေ …
၁။ ခံစားခကျြကို ဦးစားပေးတာ
ငယျရှယျသူတှမေို့ ဖွဈသငျ့၊မဖွဈသငျ့ဆိုတာထကျ ခံစားခကျြကို မူတညျပွီး ရှေးခယျြလရှေိ့ကွပါတယျ။ အခဈြရေးမှာလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယျ့ကို တကယျခဈြ တကယျ နားလညျမှုပေးတတျတဲ့သူမြိုးထကျ ရုပျခြော အပွောကောငျး တတျတဲ့ သူမြိုးကို ရှေးခယျြမိကွတယျလေ။ နောကျတော့ အဆငျမပွဖွေဈပွီး ကှဲကှာသှားကွရော။ နောကျတော့မှသာ ငါ့ကို တကယျခဈြတဲ့သူကို ရှေးမိရငျအကောငျးသား လို့ ဖွဈသှားရတဲ့ နောငျတမြိုးပေါ့…
ခဈြလှနျးတော့လညျး အပွဈမမွငျတတျတာ သဘာဝပါ။ ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့ ကိုယျ့အပျေါ အနိုငျကငျြ့မှုတှေ၊ အခှငျ့အရေးယူမှုတှေ၊ ဥပက်ေခာပွုမှုတှေ အားလုံးကို အပွဈမမွငျဘဲ ခဈြနမေိခဲ့တာပါ။ ပွတျပွီးတဲ့နောကျ အခဈြဆိုတာ မရှိတော့မှသာ ခံစားခကျြတှပေုံမှနျဖွဈလို့ ငါ ဘာလို့ရူးခဲ့တာလဲ ဆိုပွီး နောငျတရနမေိတာလေ။
၃။ ကိုယျ့ရဲ့ အပွဈတှကေိုတှေးမိတာ။
ကိုယျက အရမျးနားမလညျသေးတော့ သူ့အပျေါ မရညျရှယျဘဲ ဆိုးခဲ့မိတာတှလေညျး ရှိနိုငျတာပဲနျော။ သူက ကိုယျ့အပျေါ အရမျး ခှငျ့လှတျနားလညျပေးပမေဲ့ ကိုယျကသာ ဆိုးမိ၊ အနိုငျကငျြ့မိခဲ့ပွီး နောကျတော့ နားလညျလာတော့မှ ကိုယျ့အပျေါအရမျးကောငျးတဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရပါလားဆိုပွီး ဝမျးနညျးနောငျတရနတောမြိုးလေ။
၄။ တဈယောကျကို တဈယောကျ နားလညျအောငျ မကွိုးစားခဲ့တာ
သူက ဘယျလိုလူလဲ၊ သူနဲ့အဆငျပွအေောငျ ဘယျလိုညှိနှိုငျးဆကျဆံရမလဲဆိုတာ မတှေးမိခဲ့ဘဲ ခံစားခကျြတှေ၊ ဖွဈခငျြတာတှကေိုပဲ ရှတေ့နျးတငျမိတာမြိုးလညျး ဖွဈခဲ့မှာပဲနျော။ ဒီတော့ မပွလေညျခဲ့ကွတာ မဆနျးဘူးလေ။ နောကျတော့မှသာ သူနဲ့ ဒီထကျပို နားလညျအောငျညှိနှိုငျးနိုငျခဲ့ရငျ၊ ကိုယျဖွဈခငျြတာထကျ ဖွဈသငျ့တာကို ဦးစားပေးခဲ့မိရငျ ကောငျးမှာပဲလို့ နောငျတရနတောမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျမဟုတျတဲ့တခွားတဈယောကျကို သူခဈြနတေဲ့အခါ ဒီအခကျြတှကေို ခံစားမိပါလိမျ့မယျ။
၅။ သူ့ကို လကျလှတျခြိနျမှာ မလှတျပေးခဲ့မိတာ
တကယျတော့ ကိုယျ့အနားက ထှကျသှားခငျြသူတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ တားလို့မရပါဘူး။ ဒါကို မသိခဲ့တော့ ကိုယျ့အနားက သူထှကျမသှားဖို့အရေး သူ့ကို လကျမလှတျနိုငျဘဲ စိတျပငျပနျးဆငျးရဲခဲ့တာ၊ ကိုယျ့အတှကျအောကျကနြောကျကဖြွဈမှာကို မပူနိုငျဘဲ သူ့ကို ခယတောငျးပနျခဲ့မိတာတှကေ အဆိုးဆုံးသော နောငျတတှပေါ။ အခုနမြေားတော့ သူပွနျလာမယျဆိုရငျတောငျ ကနျတော့ဆှမျးပါရှငျလို့ ပွောမိမှာလေ။
ဒါကတော့ အခဈြဟောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး နောငျတအရမြားတဲ့ ကိစ်စတှပေေါ့လေ… ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ဘယျလောကျပဲ နောငျတရတယျဆိုဆို.. ပွီးတဲ့ ကိစ်စက ပွီးသှားပွီဟုတျ??? အတိတျကို အတိတျမှာပဲ ထားခဲ့ပွီး လကျရှိ စငျဂယျလျဘဝမှာပဲ ပြျောရှငျအောငျသာ နကွေညျ့လိုကျပါ… မပြျောတတျသေးဘူးလား… မပူပါနဲ့… အကျဒျမငျတို့ရဲ့ Singles’ Night ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတျချေါပါတယျနျော…(၁၄.၂.၂၀၁၉) ခဈြသူမြားနကေ့ရြငျ ဆီဒိုးနားမှာ လုပျမှာနျော… ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျကို သိခငျြရငျတော့ ဒီလငျ့ချ မှာ ကွညျ့လို့ ရပွီး ပှဲကို လာမယျဆိုရငျတော့ ဒီ လငျ့ချလေးမှာ Register လုပျဖို့တော့ လိုပါတယျ ယောငျးတို့ရေ….
Tagged Couple, ex, love, regret, Relationship, thoughts
ဒီစာရင်းထဲ ကိုယ်မပါဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်…
Posted on March 14, 2019 March 14, 2019 Author Yin Sandi Ko
မုန့်ဟင်းခါး Operation ( အပိုင်း-၃ )
Posted on November 5, 2018 November 5, 2018 Author AThae Kyaw
“ နေပါစေ အဒေါ် သူဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ ကျွန်မ ကြည့်ချင်သေးတယ် ။ သူက ပညာပြိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်း ပြိုင်ပေးလိုက်တာပေါ့ အဒေါ်ရယ် “
၂၀၁၉မှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာမယ့် ဖက်ရှင်Trend (၇) ခု